Wasaarada Dhalanyarada iyo Ciyaaraha Dowlad goboleedka K/galbeed oo Baydhabo ku Dahfurtey Kulan looga hadlaayey horumarinta siyaasadda dhalanyarada. – Radio Muqdisho
Wasaarada Dhalanyarada iyo Ciyaaraha Dowlad goboleedka K/galbeed oo Baydhabo ku Dahfurtey Kulan looga hadlaayey horumarinta siyaasadda dhalanyarada.
kulankan oo si wadajir ah ay usoo qabanqaabiyeen wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur galbeed iyo Tubta Nabada Soomaaliya ayaa waxaa uu socondoona mudo Sedax maalin
Waxaana loogahadlaya Hormarinta siyaasada Dhalinyarada soomaaliyeed iyo Maserka Siyaasadeed Ee Dhalinyarada Koonfur Galbeed
Waxaana Furitaanka Kulanka Ka soo qeybgaley Agaasimaha Guud ee wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed Aadan Cumar Xasan . Lataliyaal Masuuliyiinta hay ada Tubta Nabada Soomaaliya iyo Dhalinyarada Aqoonyahanada ah ee Magaalada Baydhabo
kulanka ugu Horeyn Waxaa Ka Hadlay Qaar kamid ah Gudoomiyaasha Dhalinyarada Koonfur Galbeed Waxaana ay soojeediyeen Talooyin Lagu Hor Marinkaro Siyaasada Dhalinyarasda Soomaaliya
Masuul Ka socoday Hay ada Tubta Nabada soomaaliya iyo Agaasimaha Guud ee Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa kudheeraadey muhiimada kulankan wada tashi u leeyahay Dhalinyarada,
Siid ali baafo Lateliyaha Wasaarada Dhalanyarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gaba gabadii ka hadley kanka ayaa waxaa uu Dhalanyarada Ka soo Qeyb gashey ku buuriyey in ay ka faa iideystaan Kulanka.
IMF”waan ku kalsoonahay horumarka maalyadeed ee Soomaaliya.
IMF"waan ku kalsoonahay horumarka maalyadeed ee Soomaaliya.